नेपालको घुम्नैपर्ने १३ गन्तब्य | Bishow Nath Kharel
हलेसीधाम हिन्दु, बौद्धमार्गी र किरातीको साझा तीर्थ। हिन्दुका भगवान् शिव, बौद्धमार्गीका गुरु पद्मसंभव र किराती पुर्खा रैछाकुलेसँग सम्बन्धित ठाउँ। जुन खोटाङको महादेवस्थान–४ मा पर्छ।
हलेसी दर्शनले दुःखबाट मुक्ति, पदोन्नति, खडेरीबाट मुक्ति, सन्तान लाभ र निरोगी हुने जनविश्वास छ। गुफामा धर्मद्वार, जन्मद्वार र पापद्वार छन्। गुफाका मूर्तिलाई धर्मपिच्छे फरक–फरक नाउँले पुजिन्छ। हिन्दुले पार्वती मानेकोलाई बौद्धमार्गी आयुकलश भन्छन्।
दुइटा ठुला गुफा छन्। वरपर अरू गुफा। गुफामा आ–आफ्नै हिसाबले पूजा गर्छन्। बत्ती बाल्छन्। ध्यान गर्छन्। हलेसी गुफा पहरामा छ। गुफामा महादेव बास भएको हिन्दु मान्यता छ। गुफाभित्र थरीथरीका मूर्ति। शिवलिंग, गणेश, कुमार र पार्वती। र, चमेरा।
किरातीका पुर्खा रैछाकुलेलेे गुफा पत्ता लगाएका हुन्। उनीहरू हलेसीलाई पितृ मान्छन्। हलेसीमाथिको तुवाचुङ डाँडा रमणीय छ।
बौद्धमार्गीका अनुसार हलेसीमा बसेर ध्यान गरेपछि गुरु पद्मसंभव चिरञ्जीवी बने। गुफा छेउमा मारातिका क्षिमेत ताग्तेन क्षोलिङ गुम्बा र गणेश मन्दिर छ। गुम्बामा शाक्यमुनि गौतम बुद्ध, अवलोकितेश्वर र पद्मसंभवका मूर्ति छन्।
हलेसी गुफा पश्चिमपट्टि बसाहा गुफा छ। त्यसको पल्लोछेउमा पुगेर हेर्दा माथि आकाश खुला देखिन्छ। गुफा भएको पर्वतलाई बौद्धमार्गी अवलोकितेश्वर पर्वत मान्छन्। बसाहा अघिल्तिरको बज्रपाणी र उत्तरपट्टिको मञ्जुश्री पर्वत। डाँडा ध्वजापताकाले रंगीन।
गुफामा बुद्धपूर्णिमा, लोसार, शिवरात्रि, रामनवमी, बालाचतुर्दशी, तीज, उभौली र उधौलीमा मेला लाग्छ।
हलेसीमा नेपाली सामान्यत एक रात बस्छन्। त्यहाँ मध्यम खालका होटल छन्। पानीको समस्या छ। होटल रोयल, डुङदेलो रिसोर्ट, शिवदर्शन गेस्ट हाउस, अनिता होटल, जगत होटल, हरि राई होटल, बस्नेत होटल आदि राम्रा मानिन्छन्।
गुफा नजिकैसम्म मोटर चल्छ। हलेसीसम्म बाटो पक्की छैन। घुर्मी तरेपछि उदयपुर र ओखलढुंगा जोड्न सुनकोसी र दूधकोशीको जयरामघटमा पक्की पुल छैन। बर्खा सकिएपछि अस्थायी पुल हालिन्छ।
खल्तीमा छ हजार रुपैयाँ बोक्यो भने बसभाडा र दुई रात हलेसीमा बिताउन पुग्छ। फर्कंदा मस्याङ, भट्मास, खुर्सानी, बदाम, गुन्द्रुक र मास कोसेली ल्याउने।
कसरी पुग्ने : काठमाडौंदेखि बनेपा–बर्दिबास सडकको खुर्कोट खण्डबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै घुर्मीबाट हलेसी पुग्न २१६ किमि। काठमाडौंको चाबहिल र कोटेश्वरबाट जीप छुट्छन्। जीपमा १० घन्टा।
सगरमाथा, लुम्बिनी र त्रिवेणीधाम हेर्न संसारका पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ। भोलि संसारभरका हिन्दु, बौद्धमार्गी र प्रकृतिपुजक हलेसीमा ओइरिनेछन्। त्यो दिन कल्पना गरेर हामीले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। सरकारले बेलैमा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। व्यवस्थित बसपार्क र होटल खुल्नुपर्छ। पर्यटकलाई हलेसी वरपर घुमाउने वतावारण बन्नुपर्छ।
सौराहा बजार वाइल्ड लाइफ प्रेमीको संसार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र। निकुञ्जबाहिर राप्ती किनारमा रहेको बजार उत्तर–दक्षिण फैलेको छ। त्यहीँ छन् होटल, लज, रिसोर्ट र रेस्टुराँ छन्। पाँच सयदेखि हजारौं मूल्यका कोठा छन्।
इन्डियन, चाइनिज, कन्टिनेन्टलदेखि थारू खानासम्म पाइन्छ। थारू परिकारमा घोँगी, चिँचर, हाँस र माछाको मासु र लोकल रक्सी हुन्छ।
निकुञ्जमा ५०३ गैंडा, १२५ बाघ र ६२५ प्रजातिका चरा छन्। अरू थरीथरीका जनावर छन्। सौराहा पुग्नेहरू निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा हात्ती र जीप सफारी गर्छन्। सफारीमा गैंडालगायतका जनावर देखिन्छन्।
प्याकेजमा घुम्न सजिलो हुन्छ। व्यवसायीले प्याकेज बनाएका छन्। दुईराते प्याकेजको छ हजार रुपैयाँ पर्छ। थारू संस्कृति, सूर्यास्त, डुंगा सफारी र हात्ती सफारीमा नेपाली झुम्छन्। साँझ राप्ती किनारको पबमा बसेर मदिरा तान्दै सूर्यास्त हेर्छन्। सामान्यतः नेपाली एक रात बस्छन्। जंगल वाक र डुंगा चढ्न गाइड अनिवार्य चाहिन्छ।
मरुभूमिमा हुने ऊँट चढेर सौराहा घुम्न सकिन्छ। त्यहाँका नेचर गाइड केशव खनालले बिहारबाट ऊँट ल्याएर सफारी गराउँदै आएका छन्। ऊँटको जुरोमा हौदा राखिन्छ। त्यसमाथि यात्रु बस्छन्। ऊँटमा दुई जनासम्म बस्न मिल्छ। माहुतेले डोर्याोउँछन्।
त्यहाँ नदीमा मगर गोही देखिन्छ। बजार छेवैमा आखेटोपहार संग्रहालय छ। अलिपर थारू संग्रहालय छ। हात्ती प्रजनन केन्द्रमा हात्ती हेर्न रमाइलो हुन्छ।
१० वर्षअघिदेखि क्षेत्रीय होटल संघ चितवनले मंसिर–पुसमा हात्ती दौड प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। त्यसले आन्तरिक पर्यटक बढाएको व्यवसायीको अनुभव छ।
बजारमा साँझ टिकट काटेर थारू नाच हेर्न पाइन्छ। महिला पनि नाच्छन्।
असोजदेखि पुससम्म र फागुनदेखि असारसम्म सौराहा घुम्ने मुख्य सिजन। सौराहाको पर्यटन इतिहास ४१ वर्ष पुरानो छ। सरकारले २०३० मा निकुञ्ज बनाएपछि पर्यटक आउन थाले। बिस्तारै होटल खुल्दै गए। सय होटल छन्। एसीयुक्त कोठा। वाइफाइ सुविधा।
खर्चिलो छ यात्रा। दुईराते प्याकेजसहित काठमाडौंबाट आउन जान आठ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ। त्यहाँ जनावरअंकित टिसर्ट, गैंडा, माछा, बाँदर, हात्तीका डमी र हात्तीको लिँडबाट बनेका हस्तकला पाइन्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–सौराहा १६५ किलोमिटर। काठमाडौं कान्तिपथबाट बिहान सात बजे पर्यटक बस छुट्छन् भने सौराहाबाट बिहान साढे नौ बजे। तिनले पाँच घन्टामा पुर्यािउँछन्।
अध्यक्ष, क्षेत्रीय होटल संघ चितवन
नेपाली सामान्यतः एक रात बस्छन्। हात्ती अनिवार्य चढ्छन्। वर्षमा ६० हजार नेपाली आउँछन्। धेरैजसो परिवार आउँछन्। हनिमुन मनाउन आउने पनि छन्। चिनियाँभन्दा नेपाली खर्चालु छन्। मन खोलेर खर्च गर्छन्।
पोखरा प्रकृतिको सुन्दर उपहार। एउटा सानो उपत्यकामा मन बहलाउने धेरै चिज छन्। हिमाल, ताल, गुफा, मन्दिर, गुम्बा, नदी र झरना। प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, बन्जीजम्प र जीप फ्ल्याएरजस्ता साहसिक खेल पनि त्यहीँ खेल्न पाइन्छ।
त्यहाँबाट कुमारी माछापुच्छे्र, पुठ्ठा हिउ“चुली, धौलागिरि, मोदित्से, अन्नपूर्ण, घान्द्रुक, हिउँचुली, नीलगिरि, मर्दी लम्जुङ, मनास्लुलगायत दर्जनौं हिमाल देखिन्छ।
फेवातालमा डुंगा चढिएन भने पोखरा गएको अर्थै रहन्न। पोखरा उपत्यकाको बेगनास तालमा पनि डुंगा चल्छ। अरू ताल पनि छन्, कमल, रूपा, खास्टे, दिपाङ, गुँदे, मैदी र न्युरेनी।
गुफा धेरै छन्। पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा महेन्द्र गुफा छ। त्यहाँबाट सात सय मिटरमा चमेरेगुफा। पोखरा–१८ छोरेपाटनमा गुप्तेश्वर गुफा। गुफामा १४० मिटर पसेपछि भित्रैबाट डेभिज फल्स देखिन्छ। छाँगोमा असोजसम्म पानी धेरै हुन्छ।
जमिनमुनि भासिएकी सेती नदीको रूप केआइसिंह पुलदेखि कालीखोला दोभानसम्म, नारायणथानदेखि तुलसीघाटसम्म र रामघाटदेखि ढुंगेसाँघुसम्म देखिन्छ।
संस्कृतिका हिसाबले धनी छ पोखरा। बाटुलेचौरमा सारंगी बस्ती छ। पोखरामा पाँच वटा संग्रहालय छन्। गोरखालीको बहादुरी सम्झाउने संग्रहालय केआइसिंह पुल छेवैमा छ। शक्तिघाटमा गुरुङ जनजीवन झल्काउने संग्रहालय क्होइबो छ। रातो पहिरोमा पर्वतीय जनजीवन चिनारी दिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय छ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस हाताको नेचुरल हिस्ट्री म्युजियम पुतली संग्रहालय बनेको छ। त्यहाँ छ सय प्रजातिका पुतली छन्। नयाँ बजारमा क्षेत्रीय संग्रहालय छ, जहाँ पश्चिमाञ्चलको झल्को मिल्छ।
घुम्नलाई तिब्बती शरणार्थी क्याम्प छ। हेम्जा, पृथ्वीचोक र छोरेपाटनमा। माने घुमाउँदै ‘ओम् माने पेमे हु“’ भन्नेहरू भेटिन्छन्। तिब्बती गाउँ भने हुन्छ, क्याम्पलाई।
फेवाताल, पोखरा बजार र हिमाल एकै झमटमा हेर्न विश्व शान्ति स्तुप छ। १७५ फिट अग्लो स्तुपको आँगनबाट मनमोहक दृश्य देखिन्छ। असोजदेखि हिमाल खुल्छन्। चिया सुरुप्प पार्दै हेर्न पाइन्छ।
तालमा डुंगा चढेर अनदु फेदीबाट उकालो चढे स्तुपा पुगिन्छ। छोरेपाटनतिरबाट ट्याक्सीमा जान सकिन्छ। सूर्योदय र हिमाल हेर्न सराङकोट र काहुँकोट छन्।
गुम्बा धेरै छन्। माटेपानी, हेम्जा सबैतिर। तालवाराही मन्दिर छ। विन्ध्यवासिनी र भद्रकाली मन्दिर। मियापाटनमा मस्जिद।
बास बस्न फेवा किनारमा रमाइलो हुन्छ। त्यहाँ अत्याधुनिक होटल/रेस्टुराँ छन्। संसारभरका परिकार पाइन्छ। अबेरसम्म निदाउँदैन लेकसाइड। मिठो दालभात पाक्छ, थकालीका भान्छामा। ड्यामसाइटको होटल मोनालिसा, लेकसाइडको माइलीको भान्छा, न्युरोडको थकाली भान्छा लोकप्रिय छन्।
पृथ्वीचोक, महेन्द्रपुल र सिर्जनाचोकतिर पनि छन् होटल। हल्लनचोकबाट पामे जाने बाटोमा सस्ता कोठा पाइन्छ। लेकसाइडमा छ सयदेखि हजारौं मूल्यका कोठा पाइन्छ।
दुई रात पोखरा बसेर घुम्न सात हजार रुपैयाँ। त्यसले बस भाडा तिर्न र खान/बस्न घुम्न पुग्छ। त्यहाँबाट सारंगी, डाँडाघरे वाइन, ‘पोखराको सम्झना’ लेखिएका गलैंचा कोसेली ल्याउन सकिन्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–पोखरा २०० किमि। काठमाडौंको कलंकीबाट बिहानैदेखि बस तथा माइक्रो छुट्छन्। कान्तिपथबाट बिहान सात बजे छुट्ने टुरिस्ट बस आरामदायी हुन्छ। हवाई यात्रा ३० मिनेट।
झलक थापा, पर्यटनविद्
पोखरामा प्रकृतिले अँगालो मार्छ। पर्यटक एक्लै रमाउन सक्छ। हिमाल, वनस्पति र डाँडामा हराउन सक्छ। एक दिन होइन, महिनांै बस्न सक्छ। पोखराको मातले छुन्छ। मन हुँडलिन्छ। सृजनशील बन्छ। घुम्ने ठाउँ प्रशस्त छ, भेट्ने मान्छे प्रशस्त छन्। पोखरेली अझै आत्मीय बन्नुपर्छ।
एउटा रमाइलो भनाइ छ– झापाली खेती, इलामे केटी, ताप्लेजुङको तोङ्बा र सुकुटी!
देशभर इलाम चर्चित छ, चियाबारीले। इलमी छन्, इलामे। चिया, अदुवा, अमि्रसो, ओलन (दूध), अकबरे उत्पादन गर्छन्। एग्रो टुरिज्म गन्तव्य बन्दै छ, इलाम।
नेपालको पहिलो चिया बगान त्यहीँ छ। सदरमुकाममा बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले विसं १९२० मा चिया रोपेका थिए। त्यो बेला ११८ एकडमा रोपिएको थियो। अहिले ५५ हजार हेक्टरभन्दा बढीमा चिया खेती छ। चिया प्रशोधन कारखाना विसं १९३५ मा खोलिएको।
इलाम बजार चिटिक्क छ। त्यहाँ राई, लिम्बू, बाहुन, क्षत्री, मगर, नेवार, शेर्पा, लाप्चा र मधेसी अनुहार भेटिन्छन्। ‘इलाम घुमौं जीवनभर रमाऔं’ भन्ने नारा छ, होटल एसोसिएसनको। घुम्नलायक धेरै ठाउँ छन्। माइपोखरी, सन्दकपुर, कन्याम, अन्तुडाँडा, छिन्टापु, मिकलाजोङ, टोड्के झरना, माङमालुङ, सिद्धिथुम्का, गजुरमुखी, माइखोला, पाथिभरा, मंगलबारे आदि।
इलाम बजारमा दर्जनौं होटल छन्। पाँच सयदेखि हजारौं मूल्यका कोठा पाइन्छ। अन्यत्र पनि कतै होटल छन्, कतै होमस्टे।
सदरमुकाममा भ्यु–टावर, भालुढुंगा, चुरेघाँटी गुम्बा, नारायणस्थान, माइस्थान, भीमसेनस्थान, चिया कारखाना, क्याम्पस, सिंहवाहिनी र सेतीदेवी मन्दिरलगायत पर्यटकीय सम्पदा छन्।
मेची राजमार्गको चारआलीबाट पसेपछि कन्याममा चियाबारीले स्वागत गर्छ। बगानबीचमा नागबेली सडक। मोटर वा बाइकमा हुइँकिँदा मज्जा हुन्छ। बगानलाई कुहिरोले ढाकिरहन्छ। बगानमा चिया टिपेको दृश्य सधैं देखिँदैन। चैतदेखि मंसिरसम्म मुना टिपिन्छ।
इलामको अग्लो डाँडो सन्दकपुर (३,६३६ मिटर)। ल्यान्डरोभर चढेर जान सकिन्छ। दार्जिलिङ र इलामको सीमावर्ती सन्दकपुरमा होटल छन्। त्यहाँबाट कुम्भकर्ण, कञ्जनजंघालगायत दर्जनौं हिमाल देखिन्छ।
फिक्कलमा लाप्चा जाति बस्छन्। लोपोन्मुख लाप्चा करिब ४५ सयको संख्यामा छन्। फिक्कलमा प्रेमबहादुर लाप्चा संग्रहालय चलाउँदै छन्। लाप्चा प्रकृतिपुजक हुन्। बजारमाथि फेन्सोङ गुम्बा छ। गुम्बामा बुद्ध, गुरु पद्यसंभवका मूर्ति छन्।
कहलिएको अर्को गन्तव्य अन्तुडाँडा। फिक्कलबाट १५ किमिको डाँडा (१,८२३ मिटर) बाट सूर्योदय/सूर्यास्त देखिन्छ। असोजदेखि घुम्न रमाइलो हुन्छ। गाउँमा होमस्टे सुविधा छ।
फिक्कलबाट ३५ किलोमिटरमा इलाम बजार। १० किलोमिटरमा पशुपतिनगर। पशुपतिनगर दार्जिलिङ पस्ने नाका। धेरै नेपाली फिक्कल हुँदै दार्जिलिङ पस्छन्। एक रात इलाममा बस्दैनन्। कन्याममा दुई–चार फोटा खिचेपछि इलाम घुमेको सम्झन्छन्। त्यतिमात्रै होइन इलाम। मेची राजमार्गको कोलबुङ–२ कुटिडाँडामा बहिनी पाथिभरा छिन्। ताप्लेजुङकी बहिनी।
आठ हजार रुपैयाँले बसभाडा तिर्न र इलाममा दुई रात बिताउन पुग्छ। बजारका कोसेली घरमा बम्बैसन, ललिपप, छुर्पी, चीज, चिया, अकबरे खुर्सानी, आलु आदि पाइन्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौंको कोटेश्वरबाट ६९० किमिमा इलाम बजार। कोटेश्वरबाट दिउँसो छुट्छन् डिलक्स बस। तिनले १४ घन्टामा पुर्यारउँछन्।
धर्म गौतम, इलामविद्
प्राकृतिक इलाम हेर्न सदरमुकामभन्दा बाहिरका गाउँ डुल्नुपर्छ। पर्यटकले राम्रो आतिथ्य पाएनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ। पुराना घरमा होटल चलाइएको छ। हामी व्यवस्थित होटल खोल्न र अतिथि सत्कार आत्मीय बनाउन प्रोत्साहित गरिरहेका छौं। प्याकेजमा इलाम घुमाउन कम्पनी नभएर पनि समस्या छ। पर्यटकको सुविधाका लागि इलाम–काँकडभिट्टा पर्यटक गाडी चलाउने होमवर्क भइरहेको छ।
अन्न भरिएको पाथीजस्तो देखिने ताप्लेजुङको डाँडालाई पाथिभरा (३,७९४ मिटर) का नाउँले चिनिएको छ। त्यहाँबाट कुम्भकर्ण, कञ्चनजंघा हिमशृंखला देखिन्छ। कुम्भकर्णलाई लिम्बूहरू फक्ताङलुङ भन्छन्। किराँत देवदेवी युःमा र थेःवाको क्रीडास्थल फक्ताङलुङ भएको महागुरु फाल्गुनन्दले बताएका छन्।
पाथिभरामा सिंहवाहिनी देवीका मूर्ति छन्। जनविश्वासअनुसार पाथिभरा दर्शन गरे जन्मै हातखुट्टा नचल्नेका पनि हातखुट्टा सल्बलाउँछन्, दृष्टिविहीनका आँखामा ज्योति भरिन्छ। निःसन्तानलाई सन्तानलाभ हुन्छ। गरिब धनी हुन्छन्। शत्रु निर्बल हुन्छन्। मित्र पुनःमिलन हुन्छ। पढाइमा सफलता मिल्छ।
मन्दिरमा पहिले पुजारी बस्दैनथे। ०५७ सालदेखि बस्न थालेका। चढाइएको भेटी पुजारीले पाउँदैनन्। समितिको खातामा जान्छ। पुजारीले तलब पाउँछन्।
फागुनदेखि कात्तिकसम्म पाथिभरा दर्शन राम्रो मानिन्छ। असोज–कात्तिकमा हिमाल झलमल्ल टल्किन्छन्। डाँडामा आठ वटा धर्मशाला छन्। पानीको दुःख भएकाले तीर्थालु बस्दैनन्।
कान्छीथानदेखि सेतो धागो टाँग्दै मन्दिरसम्म पुर्याुउने चलन छ। आयु लामो हुने विश्वासले। पाथिभरामा भारतको आसाम, मणिपुर, मेघालय, गुवाहटी, सिक्किम, भुटानदेखिका आउँछन्।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङदेखि १९ किलोमिटर दुरीमा छ मन्दिर। सुकेटार विमानस्थलसम्म सडक पक्की छ। फुङलिङबाट हिँडेर जान १०–१२ घन्टा लाग्छ। ठाउँ–ठाउँमा खाने/बस्ने लज छन्। १६ किमि पर भालुगौंडेसम्म रिर्जभ जीप जान्छ। फेदीभन्दा माथि होटल छैनन्। फेदीबाट दुई घन्टा उकालो बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। आराम गर्दै, पानी खाँदै। चुरोट र रक्सी खानु हुँदैन।
फुङलिङ र सुकेटारमा राम्रा होटल छन्। अन्यत्र सामान्य लज। फुङलिङ, सुकेटार जताततै तोङबा पाइन्छ। चिसोमा तोङबा मिठो हुन्छ। छुर्पी, चौंरीको घ्यु, गलैंचा, राडीपाखी, मह, ढाका कपडा, सुकुटी, अकबरे खुर्सानी, सिमी, गुन्द्रुक, सिन्की त्यहाँका कोसेली।
बेलायती वनस्पतिविज्ञ जेडी हुकर पहिलो पर्यटकका रूपमा सन् १८४८ मा ताप्लेजुङ पुगेका थिए। वर्षमा दुई लाख तीर्थालु जान्छन्। तिनमा १० प्रतिशत भारतीय, बाँकी नेपाली हुन्छन्।
पाथिभरामा चिसो हुन्छ। माकल टोपी र ज्याकेट लिएर जानुपर्छ। कोल्ड क्रिम पनि चाहिन्छ। एक साता यात्रा गर्न १५ हजार रुपैयाँ। यसले काठमाडौंदेखि दोहोरो बसभाडा तिर्न र खाना र बासलाई पुग्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–बिर्तामोड बसमा १२ घन्टा। बिर्तामोडबाट बिहान साढे चार बजेदेखि १० बजेसम्म बस पाइन्छ। फुङलिङ पुग्न १० घन्टा। फुङलिङबाट भालुगौंडेसम्म जीपमा। त्यहाँबाट तीन घन्टा पदयात्रा।
सचिव, मन्दिर संरक्षण समिति
पाथिभरा शक्तिपीठ हो। नेपालीमात्र होइन, सिक्किम, दार्जिलिङबाट समेत भक्तहरू आउँछन्। झापा, इलाम, सुनसरी, विराटनगरतिरका त वर्षैपिच्छे आउँछन्। पहिलाभन्दा पाथिभरा दर्शन सजिलो र सुविधायुक्त भएको छ। वर्षैपिच्छे नेपाली बढ्दै छन्।
स्वर्गद्वारी डाँडामा शीतल हावापानी छ। त्यहाँबाट धौलागिरि, नीलगिरि, माछापुच्छे्र, अन्नपूर्ण, लमजुङ, हिमचुली, मनास्लु, चुरेन, पुथालगायत हिमशृंखला देखिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भन्दा धार्मिक कारणले स्वर्गद्वारी चर्चित छ।
प्युठानको स्वर्गद्वारी (२,०४८ मिटर) पवित्र भूमि मानिन्छ। त्यहाँ ब्रह्माले तपस्या गरेका थिए। पाँच पाण्डव यतैबाट स्वर्ग गएका थिए। स्वर्ग जाने ढोका भएकाले स्वर्गद्वारी भनिएको किंवदन्ती छ।
स्वर्गद्वारीमा यज्ञशाला छ। झट्ट हेर्दा नौ वाट मन्दिरजस्तो देखिन्छ, तर भित्र एउटै। त्यहाँ पाञ्चायन देवदेवी, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिवका मूर्ति छन्। चार दिशाका कोठामा अग्निकुण्ड। बीचको मूल कुण्डबाट धुवाँ आइरहन्छ। वटुकले पूजा, वेदपाठ, भागवत पाठ, हवन, रुद्राभिषेक गर्छन्।
स्वर्गद्वारीमा सयौं गाई छन्। गुरुकुल विद्यालय छ। त्यहाँ वेद, रुद्री, चण्डी र व्याकरण पढाइन्छ। यज्ञशालासँगै महाप्रभुको मूर्ति छ।
बालतपस्वी हंसानन्द गिरीले विसं १९५२ मा त्यहाँ आश्रम स्थापना गरे। तिनले विश्व कल्याणका लागि अखण्ड महायज्ञ सुरु गरे। रोल्पाको रुम्टी गाउँमा विसं १९१६ मा जन्मेका नारायण गौतम पाँच वर्षको उमेरदेखि तपस्यामा लीन भए। कालान्तरमा आध्यात्मिक चिन्तक बने। उनै महाप्रभु विसं १९९७ मा बिते।
स्वर्गद्वारीमा नेपालीभन्दा भारतीय बढी आउँछन्। वैशाख पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गाई तिहार र पुस–माघमा भीड हुन्छ। खान/बस्न दुःख छ। डाँडामा होटल/लज छैन। मन्दिरमुन्तिर धरमपानीमा साना लज र नैवेद्य पसल छन्। मन्दिर हातामा धर्मशाला छन्। पैसा तिरेर केही कोठामा बस्न पाइन्छ। आश्रमको क्यान्टिनमा दालभात पाक्छ। मन्दिर क्षेत्रमा सुविधायुक्त होटल खुल्नुपर्छ।
धार्मिक सम्पदा, इतिहास र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण स्वर्गद्वारीलाई योग, ध्यान र अध्यात्म केन्द्र बनाउन सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने मनको शान्ति खोज्नेहरू लोभिन्छन्।
सात हजार रुपैयाँले भिंग्रीका होटलमा दुई र स्वर्गद्वारीमा एक रात बिताउन, खाना खान र बस भाडा तिर्न पुग्छ। उताबाट महाप्रभुका फोटा र टिम्मुर कोसेली ल्याउन सकिन्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौंबाट रोल्पा जाने बस चढ्ने। भिंग्रीमा ओर्लेर रात बिताउने। भोलिपल्ट चार घन्टा उकालो पदयात्रामा स्वर्गद्वारी। भिंग्री–धरमपानी १३ किमि। धरमपानीबाट आधा घन्टामा मन्दिर। धरमपानी–होलेरी २९ किमि।
जनकपुरको जानकी मन्दिरमा नेपाली भन्दा भारतीय बढी आउँछन्। नेपाली एक लाख हाराहारीमा पुग्छन् भने भारतीय ५ लाख। जनकपुर बजार बीचमा मन्दिर छ। झट्ट हेर्दा दरबार झैं लाग्ने मन्दिर भित्र बशिष्ठ, सतानन्द, सुनयना, राम, लक्ष्मण, भरत, शुत्रुघन राम, सीता, जनक आदिका मूर्ति छन्।
टिकमगढ, भारतकी महारानी भानु बृष कुमारीले विसं १९६८ मा बनाउन लगाएकी हुन्। २०५१ सालमा मन्दिरले शतबार्षिकी मनाइसकेको छ। त्यतिबेला ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएकाले नौलखा मन्दिर भनिन्छ। उनले जानकी मन्दिरको भाकल गरेपछि छोरा प्राप्त भएकाले ठूलो मन्दिर बनाइदिएकी हुन्।
मन्दिर भएको ठाउँमा राजा जनकले सीतालाई भेट्टाएको विश्वास गरिन्छ। अनिकाल भए पछि राजाले सुनको फालीले जोत्दा सीता भेटिइएकी थिइन्। जनक बंश हो। सीतालाई फेला पार्ने राजा शिरध्वज जनक थिए।
जानकी मन्दिरसँगै विवाह मण्डप छ। जानकी मन्दिरमा प्रबेश शुल्क लाग्दैन। मण्डपमा टिकट काट्नु पर्छ। त्यहाँ राम र सीता परिवारका मूर्ति छन्। जनकपुरमा राम र जनक मन्दिर छन्। विवाह पञ्चमीमा ठूलो मेला लाग्छ।
धनुषाधाममा होटल छैनन्। भएको एउटा धर्मशाला प्रहरीले कब्जा गरेको छ। गाउँले त्यहाँ होमस्टे गराउने योजनामा छन्।
बजारमा चार दर्जन होटल छन्। एक दर्जन धर्मशाला छन्। रामा, वेलकम, मानकी, सीता प्यालेस, सीताशरण र सिटीस्टार लगायत पर्यटकीय सुविधाका हुन्।
जनकपुरको कोसेली मिथिला कला। बजारबाहिर कुवा गाउँको नारी विकास केन्द्रमा पाइन्छ कलात्मक सामान। टिशर्ट, ऐना, कप आदि। मिथिला कलामा लामा नाक र ठूला आँखा भएका देवदेवी वा मान्छे हुन्छन्। चित्रमा सुगा, मयुर, कुखुरा, माछा, ऊँट, घोडा हात्ती, बाँस, सूर्यचन्द्र आदि पशुपन्छी हुन्छन्।
कागज, कपडा र भाँडावर्तनमा चित्र बनाइन्छ। कलाको परम्परागत सीप व्यवसायीकरण अमेरिकी महिला क्लियर बर्केटले गराएकी हुन्। उनले सन् १९८९ मा सुरु गरेको जनकपुर महिला कला परियोजनाले भुइँ र भित्ताबाट मिथिला कलालाई नेपाली कागज, कपडा र सेरामिक्सका भाँडावर्तनसम्म ल्याइपुर्याभएको हो।
एक रात जनकपुर घुमेर फर्कन चार हजार रुपैयाँ। यति रकमले बसभाडा तिर्न, बास बस्न र खाना खान पुग्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौ–जनकपुर ३५० किमि। बसमा ८ घन्टा। अर्को बाटो काठमाडौं–दक्षिणकाली हेटौंडा हुँदै जीपमा ६ घन्टा।
तनहुँको सदरमुकाम २०२५ सालसम्म बन्दीपुरमा थियो। पछि दमौली सारियो। आज बन्दीपुर पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। त्यो थुम्कोबाट मर्स्याङ्दी भ्याली देखिन्छ। भञ्ज्याङमा छ, बजार। इँटा र कलात्मक झ्याल–ढोकाले बनेका घर।
बन्दीपुर गाविसमा गुरुङ, मगर, नेवार, क्षत्री, बाहुनको बसोबास छ। बजार पुरानो नेवार बस्ती। छेउको टुँडिखेलबाट धौलागिरि, माछापुच्छे्र, अन्नपूर्ण, लमजुङ, मनास्लु, हिमचुली, बौद्ध, दोर्जे लाक्पा, गणेश र लाङटाङ हिमशृंखला देखिन्छ।
बजारभित्र छ सय मिटरमा गाडी निषेध छ। सडक दायाँ–बायाँ घर छन्। बीचमा ढुंगा बिछ्याइएको। ‘बन्दीपुर इको कल्चरल टुरिज्म प्रोजेक्ट’ले सन् २००५ देखि साढे दुई वर्ष बन्दीपुर रिनोभेट गर्योन। सडकमा ढुंगा छाप्यो।
बन्दीपुरे नेवारका पुर्खा भक्तपुरे हुन्। सन् १७७८ तिर पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडांैमाथि आक्रमण गर्दा नेवार काठमाडौंबाट भागे। भक्तपुरबाट आएका प्रधान, पिया, श्रेष्ठ, मल्ल र जोसी बन्दीपुर बसे।
त्यहाँ गज्जबको गुफा छ। सिद्ध गुफामा पुग्न बजारबाट डेढ घन्टा ओर्लिनुपर्छ। तीन घन्टा लाग्छ गुफा घुम्न। गुफामा देवदेवीका आकृति छन्।
मन्दिरहरू छन् गाउँमा। विन्ध्यवासिनी थानीमाई, खड्गदेवी, महालक्ष्मी र महादेव मन्दिर छन्। बजारमाथि गुम्बा। भारतीय सेनाका रिटायर्ड गणेशबहादुर गुरुङको अगुवाइमा बनेको गुम्बामा शाक्यमुनि बुद्धका मूर्ति छन्।
डाँडामा सहिद स्मारक छ। सातसाले क्रान्तिका तनुंगे सहिद धर्मध्वज थापा, उत्तमकुमार श्रेष्ठ, धर्मराज श्रेष्ठ, सन्तबहादुर रानामगर, चन्द्रबहादुर र खड्बहादुर गोदारको सम्झनामा बनाइएको।
बजारमा सूचना केन्द्र छ। होटलको दुःख छैन। पाँच सय रुपैयाँदेखि हजारौं मूल्यका कोठा पाइन्छ। बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्ट, गाउँघर, वल्ड इन, बन्दीपुर भिलेज रिसोर्ट, श्रेष्ठ होटल, पोखरा अर्गानिक होमलगायत राम्रा होटलमा गनिन्छन्।
पिपलथोकका २२ घरम होमस्टे सुविधा छ। १२ सय रुपैयाँको होमस्टे प्याकेजमा खाजा, डिनर, क्याम्प फायर, बास, ब्रेकफास्ट र लन्च पाइन्छ।
बन्दीपुर पर्यटन गाउँ बनेको धेरै भएको छैन। सदरमुकाम दमौली सारिएपछि नेवारले बन्दीपुर छाडे। हेर्दाहेर्दै बन्दीपुर भुताहा सहर बन्यो। त्यसैले बन्दीपुर बाहिर बस्ने बन्दीपुरेले ०४९ सालमा काठमाडौंमा शिक्षाविद् चिजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बन्दीपुर सामाजिक विकास समिति गठन गरे। समितिका अगुवाहरू चिजकुमार, सन्तकृष्ण श्रेष्ठ, डा. मदन पिया, नमस्तेभूमि श्रेष्ठलगायतले बन्दीपुरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा योगदान पुर्याषए। इको कल्चर प्रोजेक्टले काम गरेपछि पर्यटक बढे।
बन्दीपुरमा एक रात बस्ने गरी यात्रामा निस्कन तीन हजार बोक्नुपर्छ। बजारबाट बन्दीपुर लेखिएका टिसर्ट, रामकृष्ण विश्वकर्माले बनाएका हँसियासहित खुर्पेटो, ताउलो, साना गाग्री, कलश र दियो कासेली ल्याउने।
कसरी पुग्ने : काठमाडौंबाट मुग्लिन हुँदै डुम्रेसम्म बसमा जाने। डुम्रेबाट आठ किमि उकालोमा बन्दीपुर बजार। डुम्रेमा बन्दीपुर जाने बस र जीप पाइन्छ।
बैंस गुरुङ, अध्यक्ष, बन्दीपुर पर्यटन विकास समिति
नेपालीको ट्रेन्ड राम्रो छ। उनीहरू खर्च धेरै गर्छन्। परिवारसित बढी आउँछन्। रमाउँछन्। दसैै र तिहारमा भीड हुन्छ। विदेशी दुई रात बस्छन्, नेपाली एक रात। मिटिङ र सेमिनार गर्न पनि आउँछन्।
बुद्धको अर्थ ‘ब्युँझेको मानिस’। दरबारको सुख त्यागेर सिद्धार्थ गौतम ब्युँझिए। लोभ, ईर्ष्या, घमण्ड, मोह र रिस त्यागे। शान्ति मन्त्र बाँडेर प्रख्यात भए। तिनै गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी।
बोधीवृक्षमुनि कपिलवस्तुका राजा शुद्धोदन र रानी मायादेवीको पहिलो सन्तानका रूपमा इसापूर्व ६२३ मा जन्मेका। तिलौराकोट दरबारबाट माइती देवदह जान हिँडेकी मायादेवीले पुष्करिणी पोखरीछेउमा सिर्द्धाथलाई जन्म दिइन्।
लुम्बिनीमा मायादेवी मन्दिर छ। मन्दिरमा इसापूर्व तेस्रो शताब्दीदेखि सातौं शताब्दीसम्मका भग्नावशेष छन्। सिद्धार्थको जन्मस्मारक शिला त्यहीँ छ। त्यहाँ चौथो शताब्दीको मूर्ति छ। त्यसले सिद्धार्थको जन्मदृश्य झल्काउँछ। मायादेवीले सहाराका लागि रूखको हाँगा समातेकी छन्। देब्रेपट्टि उनकी बहिनी प्रजापति छन् भने दुईतिर देवगणले स्वागत गरिरहेका। र, बीचमा सिद्धार्थ।
मन्दिर वरपर विहारका भग्नावशेष। दक्षिणपट्टि पीपल चौतारी। त्यहाँ भिक्षु बौद्धमन्त्र जप्छन्। मन्दिरबाहिर सम्राट अशोकले इसापूर्व २४९ मा स्थापना गरेको अशोक स्तम्भ छ। त्यहाँ लेखिएको छ, ‘यही लुम्बिनीमा शाक्यमुनि बुद्धको जन्म भएको हो।’
विज्ञहरूले सन् १९९२–१९९६ सम्म लुम्बिनी उत्खनन गर्दा स्तम्भ र शिला भेटेका थिए। लगत्तै सन् १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्यों। सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव उथान्तले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए।
सन् १९७८ मा जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगेले लुम्बिनीको गुरुयोजना बनाए। योजनाअनुसार ११ सय ५५ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरियो। तीन खण्डमा बाँडियो। तीन वर्गमाइलमा उत्तर–दक्षिण फैलिएको भूमिमा उत्तरमा नयाँ लुम्बिनी गाउँ, बीचमा विहार क्षेत्र र दक्षिणमा मायादेवी मन्दिरसहित उद्यान बनायो।
लुम्बिनी ठूलो क्षेत्रफलमा भएकाले रिक्सा, साइकल र ट्याक्सीमा घुम्नुपर्छ।
विहार क्षेत्रमा विभिन्न देशका विहार छन्। बीचमा नहर छ। नहरको १६ सय मिटरमा डुंगा चल्छ। नहरको एकछेउमा अखण्ड शान्ति दीप छ। त्यहाँ लुम्बिनी संग्रहालय छ।
केही वर्षअघिसम्म लुम्बिनीमा थोरै होटल थिए। घुमेर भैरहवा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले बजेट इकोनोमिक र स्टार गरी ३१ होटल छन्। सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन लुम्बिनीका सचिव लिलामणि शर्माका अनुसार १६ सय बेड छन्। कोठाको मूल्य पाँच सयदेखि १२ हजार रुपैयाँ। पाँचदेखि १० जनासम्म लहरै सुत्न मिल्ने कोठा पनि पाइन्छ।
बजेट होटलमा दुई रात बसेर घुम्न ५५ सय रुपैयाँ। यसले लुम्बिनी आउजाउ गर्न बस भाडा पनि पुग्छ। व्यवसायी पाँच हजार रुपैयाँको प्याकेज बेच्छन्।
लुम्बिनीको कोसेली काठ, माटो र ढलोटबाट बनेका बुद्ध मूर्ति।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–लुम्बिनी ३२५ किमि। काठमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म बस चल्छ। भैरहवासम्म हवाई यात्रा। भैरहवा–लुम्बिनी २० किमि। भैरहवामा लुम्बिनी जाने गाडी पाइन्छ।
सचिव, सिद्धार्थ होटल एसोसिएसन
लुम्बिनी घुम्ने विदेशीको सिजन अक्टोबरदेखि फ्रेब्रुअरीसम्म। नेपाली पर्यटक बाह्रैमास आउँछन्। यो सुखद संकेत हो। धेरैजसो नेपाली दुई रात बस्छन्। विभिन्न देशका विहार घुम्छन्। विदेशीहरू कपिलवस्तु, रामग्राह, देवदह घुम्छन्। नेपाली किनमेल गर्न २९ किलोमिटर परको सुनौली नाका पुग्छन्। रेल हेर्छन्। रमाउँछन्।
सुदूरपश्चिमको खप्तड लेक घुम्ने रहर धेरैको हुन्छ। खप्तडमा जेठ–असारमा जंगली फूल, असोज–कात्तिकमा हिमाल, पुस–माघमा हिउँ र चैत–वैशाखमा गुराँसको सौन्दर्य हुन्छ। अपिशैपाल हिमालको उज्यालोमा खप्तड गम्किन्छ।
खप्तडको उचाइ १,२६२ देखि ३,२७६ मिटरसम्म। लेकमा २२ वटा पाटन (चौर) छन्। पुरानो चरन क्षेत्र खप्तड। सरकारले बाजुरा, डोटी, बझाङ र अछामको २२५ वर्ग किलोमिटरलाई ०४३ असार ९ गते खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज बनायो। निकुञ्ज सुरक्षार्थ सेना छन्।
खप्तडको चर्चा स्कन्द पुराणमा छ। त्यहाँ ‘खेचराद्री’ भनिएको छ। खेचरको अपभ्रंश हुँदै जाँदा खप्तड भएको किंवदन्ती छ। खप्तड बाबा ५० वर्ष त्यहाँ बसेका थिए। उनले ध्यान र योग गरे। बाबालाई भेट्न राजा वीरेन्द्र बरोबर खप्तड पुग्थे।
निकुञ्ज मुख्यालयलाई केन्द्र मानेर त्रिवेणीधाम, खप्तड बाबा आश्रम, खापर दह, सहस्त्र लिंग र घोडा दाउने घुम्न सकिन्छ। खप्तडमा कम्तीमा दुई रात बस्नुपर्छ। खप्तड हुँदै राराताल पुग्न १२ दिन।
युधिष्ठिर खप्तड हुँदै स्वर्ग गएको कथा गाउँले सुनाउँछन्। त्रिवेणीधाममा गंगा दसहरामा मेला लाग्छ। त्रिवेणी गंगा र जमुना र सरस्वतीको संगम। त्यहाँ नुहाए पाप पखालिने विश्वास छ। मेला भर्नेहरू रातभर जागा बस्छन्। देउडा गाउँछन्। बिहान नुहाउँछन्।
जैविक फूलबारी खप्तडमा ३७२ प्रजातिका वनस्पति पाइन्छ। कालकुट, पाँचऔंले, नीरमसीजस्ता १२५ थरी जडिबुटी र विभिन्न जातका चरा पनि।
यात्रा सजिलो छैन। त्यहाँ होटल छैनन्। निकुञ्जले बीचपानी र निकुञ्ज मुख्यालयमा गेस्ट हाउस चलाएको छ। पहिल्यै खबर गरेर जाँदामात्र सुविधा पाइन्छ। त्यसैले ड्राई फुड र स्लिपिङ ब्याग बोक्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
डोटी सदरमुकाम सिलगढीबाट झिग्रानासम्म मोटर बाटो खुलेको छ। झिग्रानामा लज छन्। झिग्राना खप्तडको प्रवेशद्वार। सिलगढीबाट रिजर्भ गाडीमात्र झिग्राना पुग्छन्। त्यसैले सिलगढीबाट हिँडेर पहिलो बास झिग्राना बस्नु बेस। दोस्रो दिन आठ घन्टा हिँडे निकुञ्ज मुख्यालय पुगिन्छ।
खप्तड घोप्टिएको कचौराजस्तो छ। त्यहाँ डोटीको झिग्राना, बझाङको छान्ना, बाजुराको कोल्टी, अछामको साँफेबगर र डोटी सीमा चौखुट्टेबाट जान सकिन्छ। बाटोमा संकेत बोर्ड छैन। पर्यटन पूर्वाधारका काम हुन बाँकी छ।
सडक यात्राबाट खप्तड जान एक साताका लागि १४ हजार रुपैयाँ। यसले बसभाडा तिर्न र खान/बस्न पुग्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–धनगढी ६५० किमि। बसमा १४ घन्टा। धनगढी–सिलगढी दुई सय किमि। बसमा आठ घन्टा। काठमाडौं–धनगढी हवाई यात्रा। सिलगढीबाट पदयात्रा।
पितृउद्वार, आत्मशुद्धि र मनोकांक्षा पूरा गर्न पञ्चकोसी दर्शन। दैलेखका शिरस्थान, नाभीस्थान, कोटिला, धुलेश्वर र पादुकालाई पञ्चकोसी मानिन्छ। गाडीमा डुल्दा एकै दिनमा सबैतिर पुग्न सकिन्छ।
दैलेख बजारबाट ओरालो झरे आठ किमिमा खोला किनारमा नाभीस्थान मन्दिर छ। त्यहाँ अखण्ड ज्वाला छ। महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा नाभी पतन भएकाले नाभीस्थान भनिएको।
मन्दिर क्षेत्रमा तीन सय वर्ष पुरानो शमीको रूख छ। शिरस्थान सतीदेवीको शिर पतन भएको ठाउँ। खोला किनारको ज्वालालाई पुजिन्छ। मन्दिरमा देवी, भैरवका मूर्ति छन्।
सतीदेवीको शिर पतन भएपछि क्रोधित महादेवको नेत्रबाट अग्नि निक्ल्यो। त्यही ज्वाला यहाँ बल्न थाल्यो। सतीदेवीको पाउ पतन भएको ठाउँलाई पादुका, कट्टी पतन भएको ठाउँलाई कोटिला र बाँकी अंग पतन भएको ठाउँलाई धुलेश्वर भनिन्छ।
शिरस्थानमा महाशिवरात्रिमा, नाभीस्थानमा माघे संक्रान्तिमा, पादुकामा जनैपूर्णिमामा, कोटिलामा वैशाख १ गते, धुलेश्वरमा नवरात्रमा र सिद्धेश्वर मन्दिरमा मंसिर पूर्णिमामा मेला लाग्छ। धुलेश्वर डाँडामा छ। अरू खोला किनारमा। पञ्चकोसीमा मोटर बाटो जोडिएकाले हिउँदमा सबैतिर जान सकिन्छ।
दैलेखको दुल्लुमा दरबार छ। इतिहासअनुसार खस राजाको वर्षे राजधानी जुम्लाको सिञ्जा थियो। हिउँदे राजधानी दुल्लु। सांस्कृतिक सम्पदाले काठमाडौं र लुम्बिनीपछि धनी भएकाले दैलेखीहरू दैलेखलाई तेस्रो धाम भन्छन्। तर, अधिकांश सम्पदा जीर्णोदार हुन बाँकी छ।
पञ्चकोसी तीर्थमा खाने/बस्ने दुःख छ। दैलेख बजारमा राम्रा होटल छन्। दुई रात बस्ने गरी यात्रा योजना बनाउनु बेस। आठ हजार रुपैयाँ खर्चले दुई रात दैलेख बजार बसेर घुम्न र बसभाडा तिर्न पुग्छ। जीप भाडामा लिनुपर्ने भएकाले पाँच जनाको समूहमा घुम्नु राम्रो।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–दैलेख सात सय किलोमिटर। बसले २० घन्टामा पुर्यारउँछन्। हवाई यात्रामा नेपालगन्ज पुगेर बस चढे सुर्खेत हुँदै साँझ दैलेख पुगिन्छ। नेपालगन्ज–दैलेख १६७ किलोमिटर।
पर्यटक बढ्दै छन्
पञ्चकोसी घुम्ने बाटो कच्ची छ। बर्खाले बिगारेकाले कम दर्शनार्थी आएका छन्। दसैंको मुखदेखि घुम्ने सिजन सुरु हुन्छ। प्रायः धार्मिक पर्यटक आउँछन्। सुर्खेत, नेपालगन्ज र बर्दियामा काम गर्ने कर्मचारी दैलेख आइपुग्दा घुम्ने गरेका छन्।
भीमेश्वर, कालिञ्चोक, जिरी, शैलुङ र गौरीशंकर दोलखाको आकर्षण। दोलखामा भीमेश्वर मन्दिर छ। भीमसेन मूर्तिलाई रुद्री पूजा गर्दा रुद्र, बलिपूजा गर्दा भगवती र दिउँसो पूजा गर्दा विष्णु मानिन्छ। जे सम्झेर पूजा गरे पनि हुन्छ।
भीमसेन नेवारका इष्ट देवता। भीमेश्वर हातामा कुमारी घर, त्रिपुरा सुन्दरी, तलेजु भवानी, महादेव मन्दिर र चैत्य छन्। दोलखाका राजा जयइन्द्रसिंह देवेल शासनकाल (विसं १५९१ देखि १६०५ सम्म) मा चाँदीको सिक्का प्रचलनमा ल्याएका थिए। टक्सार भवन जीर्ण छ।
संस्कृतिकर्मी शान्तकृष्ण श्रेष्ठले दोलखाको नेवार बस्ती काठमाडौंभन्दा पुरानो भएको भन्दै खोजी अभियान चलाएका छन्। नेवार तिब्बतबाट दोलखा हुँदै काठमाडौं पसेको उनको तर्क छ। बस्तीमा नेवार, थामी, तामाङ आदि बस्छन्।
दोलखा बजारमा होटल, लज छन्। साढे चार किलोमिटर वर चरिकोटमा पानोरमा, शुभेच्छा, संगम र लक्ष्मीलगायत दुई दर्जन पर्यटकीय होटल छन्।
चरिकोटबाट गौरीशंकर हिमाल देखिन्छ। माथि कालिञ्चोकबाट दर्जनौं हिमाल देखिन्छ। चरिकोट–कालिञ्चोक १७ किमि। डाँडा (३,७०० मिटर) मा भगवती छिन्। दिनै सयौं नेपाली पुग्छन्। हिन्दु र बौद्धमार्गीको साझा तीर्थ कालिञ्चोक। चरिकोटबाट कि रिर्जभ जीपमा जानुपर्छ कि पाँच घन्टा पदयात्रा गर्नुपर्छ।
कालिञ्चोक बेसक्याम्प कुरीमा होटल छन्। कुरीबाट पौने घन्टामा मन्दिर पुगिन्छ।
नेपाली घुम्न रुचाउने अर्को गन्तव्य जिरी हो। चरिकोटबाट ५५ किलोमिटर पर छ। जिरीलाई नेपालको स्विटजरल्यान्ड भनिन्छ। जिरीमा जिरेश्वर छन्। गुम्बा छ। चिया बगान छ। बजारमाथिको च्योर्दोङ चीज कारखानामा कात्तिकसम्म चीज उत्पादन हुन्छ। स्वीस सरकारको सहयोगका कारखाना २०३१ मा खुलेको।
जिरी सगरमाथाको प्रवेशद्वार हो। उहिल्यै एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा यतैबाट सगरमाथा चढ्न गएका थिए। लुक्लामा विमानस्थल बनेपछि धेरैजसो उड्छन्।
बजारमा जिरेल गाबिला, गौरी हिमाल, च्योर्दोङ लज, पारस, हेमन्त, हिल टाउन क्याफे, सगरमाथा, न्यु एभरेस्ट, अन्नपूर्ण, शेर्पा गेस्ट हाउस र गौरीशंकरलगायत सुविधायुक्त होटल छन्। जहाँ पाँच सय रुपैयाँदेखिका कोठा पाइन्छ।
कालिञ्चोक उचाइमा भएकाले न्याना कपडा चाहिन्छ। कालिञ्चोक, जिरी र चरिकोटमा छुर्पी, चज, चौंरीको घ्यु पाइन्छ। तीनै ठाउँमा एक–एक रात बिताउन ६५ सय रुपैयाँ बोक्नुपर्छ। त्यसले खाना, बसभाडा र बासलाई तिर्न पुग्छ।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–दोलखा बजार १३७ किमि। काठमाडौंको पुरानो बसपार्कबाट दोलखासम्म बस छुट्छ। तिनले पाँच घन्टा लगाउँछन्।
शान्तकृष्ण श्रेष्ठ, संस्कृतिकर्मी
वर्षमा ६० हजार नेपाली भीमेश्वर दर्शन गर्छन्। आजका युवा मन्दिर धाउन थालेका छन्। उनीहरूमा आध्यात्मिक भावना देखिन्छ। भीमेश्वरमा मात्रै होइन, कालिञ्चोकमा पनि भीड लाग्छ। जिरीमा पनि बढ्दै छन्। युवा मोटरबाइकमा आउँछन्। नेपाली एक रात बस्छन्। हामी पर्यटकलाई तीन रात बसाउने प्रयासमा छौं।
बर्सेनि लाखौं नेपालीले मनको इच्छा पुर्याीइदिने मनकामनाको दर्शन गर्छन्। बोका र भाले चढाउँछन्। पूजा गर्छन्। केबुलकार चल्न थालेपछि दर्शनार्थी बढे। पहिला आँबुखैरेनीबाट पाँच–छ घन्टा हिँड्नुको विकल्प थिएन।
पृथ्वी राजमार्गको कुरिनटारबाट १२ मिनेटमै केबुलकारमा मन्दिर मुन्तिर पुगिन्छ। केबुलकार स्टेसनदेखि कोसेली र खाना बेच्ने रेस्टुराँ छन्। होटलमा छ सय रुपैयाँदेखिका कोठा पाइन्छ। विशेषतः बिदाका दिन रातै बस्ने गरी नेपाली जान्छन्।
काठमाडौंबाट नजिक गन्तव्य भएको र केबुलकार चलेकाले अधिकांश गएकै दिन फर्कन्छ। एक रात बसे थान डाँडाबाट सूर्योदय हेर्न पाइन्छ। मनास्लु, अन्नपूर्ण, लाङटाङ र लमजुङ हिमालले स्वागत गर्छन। बक्रेश्वर गुफा पनि गज्जब छ।
वर्षमा नौ लाखजति नेपाली केबुलकारबाट जान्छन्। दुई लाखजति हिँडेरै पुग्छन्। जाडो याममा हिँड्नेहरू बढी हुन्छन्।
मन्दिर जीर्णोद्धार हुँदै छ। भेटीजति पुजारीको पोल्टामा जान्छ। मनकामना क्षेत्रमा मोटर बाटो पुगेको छ। आँबुखैरेनीको गोर्खामार्ग हुँदै साढे १४ किलोमिटमा बसपार्क। त्यहाँबाट १५ मिनेटमा मन्दिर पुगिन्छ। त्यस्तै गोरखा मार्गको नौ किलोबाट मन्दिर पुग्ने सडक १७ किलोमिटर छ। अरू बाटा पनि छन्।
कसरी पुग्ने : काठमाडौं–कुरिनटार बस यात्रा। कुरिनटारबाट मनकामना केबुलकारमा।
मुगुको रारातालले मोहनी लगाउँछ। उपत्यका (३,००० मिटर) वरपर जंगल। १६७ मिटर गहिरो, ५.१ किमि लम्बाइ र २.७ किमि चौडाइको ताल। हिँडेर फन्को मार्न चार घन्टा लाग्छ।
देशकै ठूलो तालको पानीको रङ छिनछिनमा बदलिन्छ। कहिले निलो, कहिले सेतो र कहिले कालो देखिन्छ। माछा मार्न पाइन्न। नुहाउन पाइन्न। डुंगा चढ्ने सुविधा छैन। हेर्नमात्रै पाइन्छ।
छायानाथ हिमालको काखमा ताल। मुर्माट टप (३,७२६ मिटर) बाट पूरै तालको दृश्य देखिन्छ। त्यहाँ पुग्न तीन घन्टा उकालो हिँड्नुपर्छ। टपबाट बाजुरा, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगुका गाउँ अनि हिमाल देखिन्छ। शान्त वातावरणमा मन प्रफुल्ल हुन्छ। योग र ध्यान गरूँगरूँ लाग्छ।
त्यहाँ एउटामात्र डाँफे लज छ। दालभात पाक्छ। त्यसबाहेक उपत्यकामा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र सेनाको ब्यारेकमात्रै छ। सरकारले २०३२ सालमा निकुञ्ज बनाएको हो। निकुञ्ज बनेपछि त्यहाँका दुई गाउँ रारा र छाप्रुलाई तराई सारियो।
आक्कल–झुक्कल नेपाली पुग्छन्, रारामा। सजिलो छैन त्यहाँ पुग्न। नेपालगन्जबाट ताल्चा उडान नियमित हुँदैन। भइहाले पनि चार्टर फ्लाइट हुन्छ। यात्रुले महँगो तिर्नुपर्छ। जुम्लाबाट हिँडेर जान दुई दिन एक बिहान लाग्छ। पदमार्गमा खस भाषाको उद्गमथलो सिञ्जा उपत्यका घुम्न सकिन्छ।
सदरमुकाम गमगढीसम्म सडकको ट्र्याक खुलेको छ। केही वर्ष लाग्नेछ बस चल्न। एक साता यात्रा गर्न २५ हजार रुपैयाँ। यसले नेपालगन्जबाट जुम्ला/ताल्चा उड्न र बाटोमा खान/बस्न पुग्छ। राडीपाखी, सिमी, यार्सागुम्बा, स्याउ, डालेचुक, ओखर, गुराँसको जुसलगायत जडिबुटी राराको कोसेली।
कसरी पुग्ने : काठमाडौंबाट नेपालगन्जसम्म बस वा हवाई यात्रा। नेपालगन्जबाट ताल्चा उडान। जुम्ला उडेर जाँदा दुई दिन एक बिहान पदयात्रा। ताल्चाबाट दुई घन्टामा ताल किनार
अफिसको भित्ताभरि अंग्रेजी रक ब्यान्ड ‘बिटल्स’को पोस्टर छ। किशोर अवस्थादेखि नै यो ब्यान्डको ‘डाई हार्ट फ्यान’ हुनुको नातालाई उनले जीवित राखेका छन्। नाङ्लो बेकरीका सञ्चालक श्याम कक्षपति देखिन्छन् पनि– ‘बिटल्स’का…
एउटा फरक तीज
पोखरा- सिर्जनाचोकको साइमन पार्टी प्यालेसमा शुक्रबार तीजका गीतहरु घन्किरहेका थिए। रातो साडीमा रंगिएका पचासौं महिला त्यहाँको ठूलो हलमा रमाइरमाइ नाचिरहेका थिए। तीजे उमंगमा रमाइरहेको माहौलको अर्काे कुनाको वातावरण भने बेग्लै…
दुर्व्यसनले जन्माउँछ अपराध
घटना १-आफूलाई मन परेको देशको जर्सी र मोबाइल किन्न चितवन भरतपुर–७ का १७ वर्षीय टेकबहादुर सुयलले साउन पहिलो साता स्थानीय तीन बालकलाई अपहरण गरी बन्धक बनाए। उनी अहिले प्रहरी हिरासतमा…
काठमाडौं– बालाजु, नेपालटार बस्ने गोरखाकी मनकुमारी ढकाललाई जोडसँग छाती दुख्न थाल्यो। परिवारले हाँपदाँप गर्दै वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पुर्यारयो।
डिएगो म्याराडोना (अर्जेन्टिना) विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले म्याराडोनासँगै पेलेललाई २०औं शताब्दीको उत्कृष्ट खेलाडीमा चुनेको थियो। सन् १९६० को अक्टोबरमा ३० मा जन्मिएका म्याराडोना फुटबल इतिहासमा एकबाट अर्को क्लबमा दुईपटक विश्व…
हलेसीधाम हलेसीधाम हिन्दु, बौद्धमार्गी र किरातीको साझा तीर्थ। हिन्दुका भगवान् शिव, बौद्धमार्गीका गुरु पद्मसंभव र किराती…
मुलुकभर होमस्टेको लहर चलेको छ। पर्यटकलाई गाउँलेकै भान्छामा खानपिन गराएर घरमा बसाइन्छ। त्यसैले होटलभन्दा सस्तो हुन्छ।…
पोखरा विमानस्थल बनेपछि २००८ सालमा पहिलोपटक यहाँ आएको जहाजको यात्रु बनेर आएका तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालालाई…
शुक्रबार आयो कि कता जाऊँ कता जाऊँ लाग्छ। साथीहरूसँग काठमाडौं वरपरका गाउँ पुगिहाल्छु। एक रात बसेर..
Source : – See more at: http://www.nagariknews.com/nagarik-sanibar/story/25075.html#sthash.c4yKrGqm.dpuf